Soundcloud si loo bilaabo adeeg bille ah | Wararka IPhone
Soundcloud si loo bilaabo adeeg bille ah
Shirkadda Jarmalka ee ka dambeysa Soundcloud ayaa hadda cusbooneysiisay codsigeeda iOS iyo barnaamijyada kale ee moobiilka loogu talagalay amawaxay bixiyaan adeeg cusub oo rukumo ah oo loogu talagalay soo dejinta muusikada ka mid ah dadka isticmaala. Adeeggan cusub ayaa loogu magac daray 'Soundcloud Go' wuxuuna ku kacayaa 12,99 euro bishii.
Adeeggan, sida Spotify iyo adeegyada kale ee muusikada qulqulka, haddii aan ka iibsanno App Store waxay leedahay qiimo dhan 12,99 euro Halka haddii aan si toos ah uga kireysano websaydhka, waxaan bixin doonaa saddex euro oo ka yar. Taasi waa kootada ay Apple ka ilaalineyso dhammaan iibsiyada laga sameeyay App Store.
Sidan oo kale, adeegyadan muusikada qulqulaya ayaa sii ahaanaya laga heli karo isla madal aan dakhligu ka lumin. Hada, hadaad tahay isticmaale Soundcloud, waa inaad ogaataa in adeegan aan wali la helin. Dhowr ayaa ah adeegsadayaasha awood u yeeshay inay ku ogaadaan ujeedooyinka shirkadda iyada oo loo marayo koodhka iyo qoraallada horumarinta ee dalabka.
Sida adeegyada muusikada ee qulqulka badankood, Soundcloud Go waxay na siisaa suurtagalnimada inaan awoodno keydi heesaha gadaal loo maqli karo adigoon u baahnayn qadka internetka. Runtii nama siiso wax aannaan ka heli karin Apple Music ama Spotify, isla qiimo, laakiin marka la eego guusha ay sii deynayso muusikada, Jarmalka waxay doonayaan inay helaan gabal keega ah.
Soundcloud waa shabakad bulsheed oo loogu talagalay muusikiistayaasha taas oo u oggolaanaysa inay qaybiyaan muusikadooda, laakiin si ka duwan kuwa kale, Soundcloud muusiggu horeba diyaar ayuu u yahay in la dhagaysto si loo ganacsado oo ugu yaraan taasi ay tahay fikradda ah 'Soundcloud Go', si ay awood ugu yeelato muusigga faa'iido u leh in xirfadlayaashu ay curiyaan laakiin aysan helin dariiqyada lagama maarmaanka u ah inay u qaybin karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Soundcloud si loo bilaabo adeeg bille ah
WhatsApp hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka jawaabto oo aad sheegto fariimaha kooxaha
IPhone SE wuxuu soo jiitaa dad badan oo isticmaala Android